Rano Testosteron Enanthate vovoka (315-37-7) hplc≥XUMX% | AASraw
/ Products / Anabolika Steroids / Serasera testosterone volo / Testosterone Enanthate vovoka
3.50 avy amin'ny 5 miankina amin'ny 2 mpanjifa naoty
SKU: 315-37-7. Sokajy: Serasera testosterone volo, Anabolika Steroids
Testosterone Enanthate dia iray amin'ireo karazan-tsivana maro samihafa amin'ny Testosterone misy. Izany dia fitambarana mitoka-monina misy fihenam-bidy malalaka noho ny eatera enanthate lehibe mifandray amin'ny molekiolan'ny testosterone.
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maotera avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny testosterone enanthate (315-37-7), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Lahatsary vovoka poizina testosterone
Ny testosterone roahin'ny testosterone enanthate karazan-tsoratra fototra
Meny fitetezana 400.59
Rare Testosterone Enanthate ny fampiasana vovoka amin'ny tsingerim-pandaminana
Ny Testosterone dia mampihetsi-po ny anaran'ny vovoka mangatsiaka
Ny anarana iraisana hafa dia Test E, Testo E, Enanthate, etc.
Testosterone Enanthate dia iray amin'ireo karazam-pandrefesana maro samihafa amin'ny Testosterone misy. Izany dia fitambaran-javatra tsy azo ampiasaina miaraka amin'ny fihenan'ny famotsoran-keloka noho ny etantona enanthate lehibe mifandray amin'ny molekiolan'ny Testosterone. Izany dia mampivoatra ny tahan'ny fanafahana sy ny antsasaky ny Testosterone ho an'ny famoahana mora kokoa. Ny ankamaroan'ny vokatra Testosterone izay noforonina dia singa tokana izay ahitana endriny iray voafaritra, mifanohitra amin'ny vokatra Testosterone izay ahitana venty amin'ny vary maro samihafa vetivety ao anaty rano (toy ny Sustanon 250, ohatra). Ny testosterone izay tsy voamarina dia mihazona ny antsasaky ny androm-piainany, izay mahatonga ny fampiasana tena tsy mampino sy tsy mahomby (Testosterone fitsaharana dia iray toy ny Testosterone vokatra izay ahitana Testosterone madio tsy misy azo esorina, ary tsy misy ny esters mifandray amin'ny rafitra). Ny Estera Enanthate dia manitatra ny antsasaky ny testosterone amin'ny andro 10, ary mitombo ny haavon'ny ranon-dra amin'ny hormone mandritra ny fe-potoana feno amin'ny 2 - 3 herinandro. Ny Testosterone dia heverina ho ny steroid indrindra anabolic izay mety hampiasain'ny olona, ​​ary mora ny steroid indrindra sy ny steroid amin'ny endriny, amin'ny fomba ahoana no azo ampiasaina amin'ny tsingerina ary amin'ny tanjona sy tanjona samihafa.
Rà ny Testosterone Enanthate rongony
Intramuscular injection: matetika 50-250mg isaky ny isaky ny 2-4weeks. Mihena ny asan'ny firaisana, 100-400mg isaky ny mandeha, 1-2 isan'andro isan'andro. Aretim-bovoka, 100-200mg isaky ny isaky ny 3-4weeks.
Fampitandremana momba ny vovoantom-pihetseham-bolo vita amin'ny testosteron
Ny dosage lehibe na ny fampiasana maharitra, mety miteraka ny fihenan'ny rano sy ny oda. Ny vehivavy dia mety manana soritraretin'ny maha-lahy sy maha-vavy rehefa ampiasaina.
Orinasa mpanentana testosterone rongony
Araka ny voalaza, Testosterone Enanthate dia Testosterone tsotra fotsiny amin'ny Estera Enanthate mifamatotra amin'ny rafitr'asa simika Testosterone. Ny 'Enanthate' indrindra dia ny asidra enanthoika, fa voafatotra ho an'ny Testosterone indray mandeha amin'ny fomba simika amin'ny fatorana ester (na fifamatorana ester). Ny asidra enanthoika dia mifamatotra amin'ny vondrona hydroxyl 17-beta ao amin'ny rafitra Testosterone. Ny steroids anabolika anabolika dia matavy be lamosina, ary mivoaka tsikelikely avy amin'ny tranokala fitsaboana - na izany aza, tsy izany no antony lehibe mahatonga ny esters hanitatra ny tahan'ny fanafody anabolika. Ny antony voalohany amin'ny fampitomboana ny halavam-piainana sy ny famotsorana azy dia satria rehefa miverina amin'ny ra ny Testosterone Enanthate, miasa ny enzymes mba hialana amin'ny fifandraisana eo amin'ny ester sy ny hormone, izay mitaky fotoana be dia be. Ny vokatra farany dia ny fanesorana ny esters avy amin'ny hormone amin'ny enzymes, ary ny sisa tavela dia testosterone madio izay afaka maivana ny asany ao amin'ny vatana. Ity dingana misy ny enzymes miala amin'ny ester avy amin'ny molekiolan'ny Testosterone ity dia tompon'andraikitra amin'ny famenoana haingana. Ny Testosterone irery tsy misy ester mifandray aminy dia manana ny antsasaky ny fiainana 2 - ora 4. Rehefa mifatotra amin'ny esanthate ester izany, ka mamorona Testosterone Enanthate, ny antsasaky ny Testosterone dia hatomboka amin'ny andro 10, izay manome fanafahana maoderina sy hetsika haingana.
Fanamarihana: Tsindrio ny teboka E = 90-96 F / 34-39 ℃. Tena mora ny mamantatra raha ny fahadiovanao na ny vovony dia voadio na tsia.
Testosterone Enanthate Marketing
Ahoana ny fividianana vovo-dronono avy amin'ny AASraw
AASraw manome ny fahadiovana 99% Testosterone dia mampihena ny vovony mangatsiatsiaka amin'ny mpanao biriky na laboratoara ambanin'ny tany noho ny fampiasana azy.
Testosterone Enanthate manta testosterone E
nantate Raw Powder Recipes:
1) Fihetseham-po mena volo 5 gram conversion 20ml @ 250mg / ml
MLG menaka sesame kely 15.25 ml
2) Testosterone mamelon-tsoloka 100g 500ml @ 200mg / ml
10ml of alcoholic benzyl
3) Testosterone mamelon-tsolika 12g 40mls @ 300mgs / ml
Aiza no hividianana vaksiny volo online?